Maitiro ekuve ne Instagram mune iyo Gnu / Linux terminal | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji uye vazhinji vashandisi vanoshandisa kana vane Instagram pakati peyavanofarira masocial network. Iyo pasocial network inoenderana nemufananidzo wekupa vashandisi vayo, chimwe chinhu chisingaenderane neGnu / Linux Terminal kana zvirinani zvinoita sekunge pakutanga kuona.
Tichangobva kuona chirongwa mune script fomati inobatana needu Instagram profile uye inoratidza isu Instagram mifananidzo mune inouraya. Zviripachena, ruvara rwunoonekwa nekusavapo kwaro muchirongwa cheTerminal asi hazvizovhiringidze hunyengeri uhu uye kukwanisa kuona mifananidzo zvakanaka, izvi kana zviri muchimiro cheMatrix.
Chekutanga pane zvese, isu tichaida tine Python nePip3 yakaiswa pane yedu Gnu / Linux kugovera. Izvi zvinogona kuzadzikiswa nekuisa iyo python-pombi package, pasuru ine zviwanikwa zvinodiwa kuti chirongwa chishande. Kana tangowana izvi, tinobva tananga yepamutemo chirongwa chekuchengetedza uye tinotora pasi.
Chinyorwa chePython chichatibvumira kuti tione mifananidzo ye Instagram yedu
Unzip zip package uye vhura terminal mukati meiyo folda. Iye zvino tinonyora zvinotevera:
Mushure meizvi, isu tichaita script yechirongwa chinoita kuti Instagram ishande mune yedu terminal; izvi zvinoitwa seinotevera:
Ichi chinyorwa chichatibvunza isu zvitupa zveedu Instagram profile kuti tibatane neiyo Instagram API. Akadaro zvitupa zvinozoitirwa mune yeakavimbika.json faira. Iyi faira inogarwa pane yedu hard drive saka hapana dambudziko rekuchengetedza. Uye kana chinyorwa chabatanidzwa kuaccount yedu, tichaona iyo mifananidzo inoonekwa pane yedu Instagram mune yakanaka yekupedzisira toni toni. Iyi script Haisi huru Instagram chirongwa cheGnu / Linux asi chichava chinoshanda kune avo vanongoshandisa iyo Gnu / Linux Terminal. uye ndoda kuziviswa nezve ino inozivikanwa network.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuve ne Instagram mune iyo Gnu / Linux terminal
Dzidza Zypper nemirairo yakapusa iyi